> Resource > iPad > Sida loo hagaagsan Photos in iPad
Everton iyo isagoo ciyaaryahan video wanaagsan, iPad kale ee uu qabtaa sida side sawir la qaadan karo. Sidaa daraadeed, aad awoodaan si ay u muujiyaan ama ku eegaan sawirada ay screen weyn oo cad. Si aad uga dhigto, ugu horreeya oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad u hagaagsan sawiro iPad.
Haddii aad loo isticmaalo in lagu sawiro in iPad syncing la Lugood, waxaad arki kartaa inuu sawiro ku daray hore baabi'i doontaa ka dib markii ay u hagaagsan. Laakiin, marmarka qaarkood, photos yihiin sida xusuusta oo muhiim ah sida aad doonayso in aan iska bixiyo? Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo ah iPad qalab kala iibsiga sawir caawimaad. Halkan waa xaq hal - Wondershare TunesGo (diyaar u ah dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Tani iPad qalab kala iibsiga sawir u hagaagsan karaa badan oo sawiro si aad iPad waqti. Ma tirtiri doonaa sawir kasta oo jirka ah inta lagu guda jiro nidaamka sawirka.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaan kuu soo bixiyo info faahfaahin ku saabsan iPads taageeray, macruufka, iyo nidaam computer looga baahan yahay .
Hage talaabo-talaabo ah oo ku saabsan sida loo hagaagsan photos in iPad
Labada version Windows iyo version Mac waxaa laga heli karaa. Just download xaq mid aad PC ama Mac Windows. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in ay qaataan Wondershare TunesGo - version Windows sida tusaale. Hadda, 'bilaabaan!
Tallaabada 1. Daahfurka this iPad qalab kala iibsiga sawir iyo xiriiriyaan iPad
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi this iPad kala iibsiga sawir qalab on your computer. Waxaa Launch. Markaas, xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka via cable USB ah. Ka dib markii in, tan uu furmo suuqa hoose muuqan doonaa shaashadda kombuyuutarka aad iPad muujiyey it on.
Tallaabada 2. nidaameed photos in iPad aan Lugood
Hadda, aad u hesho "Sawirro" tab ee geedka buugga bidix. Waxaa Riix si aad u hesho suuqa kala sawirka. Haddii aad rabto in aad u hagaagsan photos in album gaar ah. Waxaad riix kartaa "Add" in la abuuro hal. Waxa Magaca. Markaasaa waxaa u furo oo guji "Add" mar kale. Dul meesha photos yihiin badbaadiyey. Hagaagsan sawiro si aad iPad.
Haddii aad rabto in aad samayn lama doonayo in lagu badbaadiyo sawirrada si album ah. Waxaad ka furan kartaa Library Photo iyo jiididda iyo hoos u aad sawiro doonayay in ay.
Si wanaagsan baad yeeshay! Sawiro ayaa laga synced in aad iPad. Ka sokow, ee photos jir ah ayaa weli aad iPad. Iyada oo ay taasi iPad qalab kala iibsiga sawirka, marna ma u baahan tahay inaad ka welwelina wixii sawiro laga badiyay ka dib markii syncing sawiro cusub aad iPad.
Hadda, isku day inaad si hagaagsan TunesGo sawiro si aad iPad keligaa.